नेपालमा दैनिक झण्डै २ लाख कोरोना संक्रमित थपिन सक्ने ! – Ramailo Sandesh
काठमाडौं । नेपालमा पनि प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमित बढिरहेको छ । आज झण्डै ५ हजार व्यक्तिलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङमा भाइरोलोजिष्ट डा. अर्चना श्रेष्ठले नेपालको संक्रमण अवस्था भारतको भन्दा ख’राब रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले अहिले नेपामला १ जना व्यक्तिले २ जनालाई संक्रमित बनाइरहेको देखिएको बताउनुभयो । यही दरमा संक्रमण बढिरहे र नियन्त्रण गर्न नसके नेपालमा दैनिक नयाँ संक्रमितको संख्या झण्डै २ लाख हुने अवस्था आउने चे’तावनी उहाँले दिनुभयो । विश्वको संक्रमणदरको अवस्थाबारे तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै नेपालमा अहिलेकै गतिमा संक्रमण बढिरहे दैनिक १ लाख ९३ हजार नयाँ संक्रमित थपिने प्रक्षेपण उहाँले गर्नुभयो ।
यो अवस्था एक महिनाभित्रै नै आउनसक्ने उहाँकाे भनाइ छ । संक्रमणको मात्रै नभई मृ’त्युदर पनि ब’ढ्नसक्ने भन्दै उहाँले नेपालले दैनिक १५० संक्रमितलाई गु’माउनपर्ने परिस्थिति आउन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले संक्रमणबाट जाे’गिन स्वास्थ्यका मा’पदण्ड क’डाइका साथ पालना गर्न सर्वसाधरणलाई अ’पिल गर्नुभयो ।
नमस्ते मेरो नाम पुजा कार्की मेरो घर कैलाली सुदुर पश्चिम हाल म भारतको महाराष्ट्र प्रदेश मुम्वईको एक अस्पतालमा कार्यरत छु। आज म कोभिट १९ बारे केही भन्न र जानकारी गराउन गइरहेको छु।अहिले भारतमा कतिपय बि’रामीहरु कोरोना पोजेटिभ भएर बिरामी बेड नपाएर घरमै मृ’त्यु भएको छ। अस्पतालमा बेड पाउनेहरु पनि अक्सिजन नपाएर अस्पतालमै मृ’त्यु भएको अवस्था छ। कतिपयलाई आ’ईसीयू मिलेको छैन कतिपयलाई पाइप लाइन मिलेको छैन।
आ’ईसीयूको कुरै नगरौँ वार्डमा बेड छैन। बि’रामीलाई एउटा सि’लिण्डर दिन सकेको छैन। अक्सिजन नपाएर धेरै को’भिडका बि’रामीको मु’त्यु भइरहेको छ। मृ’त्यु भएको बि’रामीको दा’हसं’स्कार गर्ने घाटमा ज’मिन नभएर २४ घण्टा ४८ घण्टादेखिका ला’सहरु बाहिर नै स’डेर बसेको अवस्था छ।त्यसैले गर्दा नेपाली दाजुभाइहरु तपाँईहरु जहाँ हुनुहुन्छ सतर्क भएर ब’सिदिनु होला। र अर्को कुरा न’आत्तिकन तपाइँहरु जहाँ हुनुहुन्छ सोही स्थानमा सु’रक्षित भएर बसिदिनु होला यहाँबाट नेपाल गएर पिसिआर रिर्पोट लिएर जानुहुन्छ तर घर जान ३ दिन लाग्छ।
तर त्यो समयमा पनि को’भिड लाग्न सक्छ, तपाइँलाई लाग्यो भने परिवारलाई लाग्न सक्छ परिवारलाई लाग्यो भने स’मूदाय हुँदै सारा देशमा लाग्छ। अहिले नेपालको अवस्था एकदमै शान्त छ। त्यसैले नेपालमा भारत जस्तो परिस्थिति भो’ग्न नपरोस्। भारत जस्तो परिस्थिति निर्माण भयो भने नेपालले नियन्त्रण गर्न सक्दैन।किनकी हाम्रो सानो देशमा आवश्यक ज’नश’क्ति छैन, गुणस्तरीय अस्पताल र औ’षधि छैन। भारतमा जति औ’षधि उत्पादन हुन्छ, जति अक्सिजन ग्यास उत्पादन हुन्छ त्यति नेपालमा छैन। अहिले यो सं’क्रमणका’लीन परिस्थितिमा कोरोनासँग भारत झु’केको अवस्था छ।
नेपालमा यो महिना विहे पार्टी चलिरहेको छ। यो सब बन्द गरेर कडाइका साथ सरकारले लकडाउन गर्नुपर्छ। अहिले भारतको अस्पतालहरुमा बि’रामी राख्ने बेडहरु कँहि पनि खाली छैन, बि’रामीहरुले बे’ड नपाएर दिनभर एम्बुलेन्समै घु’मेर साँझ एम्बुलेन्समै मृ’त्यु भएको अवस्था छ।नेपालको परिदृश्य देखेर म अचम्म परेको छु। खुला सीमा भएको देश भारतमा यस्तो अवस्था आउँदा नेपालमा भने धु’मधामका साथ पार्टी विहे चलेको छ। टिकटक बनाउन पार्क, गा’ड्रेनहरुमा भि’डभाड गरेको अवस्था छ। फोटो सु’टका लागि ठूला ठूला होटेलहरुमा पा’र्टी गरेको अवस्था छ।
त्यसैले नेपालमा यस्तो खाले अवस्था नआओस् भनेर सरकारसँग लकडाउन गर्न र नेपाली जनता सतर्क र संयमित हुन आग्रह गर्दछु। हजार दुई हजार संक्रमित भएपछि लकडाउन गर्छु भन्ने सरकारको मनाशय छ भने नेपाल सरकारलाई चु’नौतीका साथ भन्छु त्यो नियन्त्रण भन्दा बाहिर जानेछ।र भारतमा भएका नेपाली दाजुभाइहरु पनि तपाइँहरु पहिलेको जस्तो हुनुहुन्न सबै शिक्षित हुनुहुन्छ, कुरा बुझ्नु हुन्छ। त्यसैले नेपाल नजानु जहाँ हुनुहुन्छ त्यँहि सुरक्षित भएर बस्नु होला, तपाइँ पोजेटिभ हुनुभयो भने परिवार, समाज र देश नै पोजेटिभ हुनेछ।